Ady amin’ny Coronavirus: ho avy ny fitaovam-pitiliana haingam-piasa | NewsMada
Par Webmaster Two sur 25/03/2020
Nilaza ny filoham-pirenena Rajoelina Andry, nandritra ny tatitra nataony ny alatsinainy alina teo, fa ho avy ny fitaovana avy any Etazonia sy avy any SIna hanampiana an’i Madagasikara amin’ny ady atao amin’ny valanaretina Coronavirus.
Ho tonga amin’ity herinandro ity ny cargo misy ireo fitaovana arifomba ahafahana manao fitiliana haingana ny marary. Tsy voatery miandry ela intsony ny vokatry ny fitiliana fa 20 mn ihany dia mivaly ka ahafantarana na voan’ny Coronavirus na tsia ilay olona.
Ahafahana mitsabo haingana sy mandray ny fepetra rehetra amin’ilay olona mitondra ny tsimokaretina ny fahafantarana ny toe-pahasalamany mialoha, indrindra ireo olona salama vatana kanefa mitondra ny tsimokaretina.
Manamora ny fifehezana ny aretina tsy hiparitaka ny fahazoana io fitaovana arifomba sy haingam-piasa io, raha ny nambaran’ny filoham-pirenena hatrany.
Mbola ao anatin’ny “stade I” i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Tsy mbola misy ny maty ary latsaky ny 500 ny marary. Ezahina ny hitazonana io fetra io.